Xoojinta Website Website - Tusaha Tilmaamaha
Websiyo badan oo e-commerce ah ayaa lagu aasaasay WordPress. Dadka kala duwan waxay la yaabaan saameynta ay leeyihiinfulinta hacks kala duwan oo laga yaabo in ay ku yimaadaan bogagga kala duwan WordPress. Si daacadnimo leh, internetka ayaa ka buuxa dadka oo dhannoocyada falalka xunxun. Laga soo bilaabo spamming si ay u tuuraan, waxaa cad in hackers ka dibna bartilmaameed aad website iyo fulin qaar ka mid ah sharkoodaficilada ujeedada. Caadi ahaan, khaniisiinta ayaa iska dhigaya in ay yihiin dad xiiso u leh dallacaadda SEO ama olole kale oo aad ku socoto - vision ecig spinner 2 vision.Taa bedelkeeda, waxay ku dhammaanayaan in la fuliyo qaar ka mid ah khadadka waaweyn ee waaweyn.
Kharajyada caadiga ah waxaa ku jiri kara qorista shabakada (XSS), phishing, xadid shakhsi ahaaneedmacluumaadka iyo sidoo kale wareejin been abuur ah. Dad badan ayaa malaayiin macaamiisha 'credit card' ka bixiyay oo kaliya inay tagaan oo sameeyaanbedelaya gadaashooda. Xaaladaha kale, waxay soo dejin karaan bogga internetka waxayna ku salaamayaan dadka leh waxyaabo xiiso leh koontadooda.Sidaa darteed, ammaankaaga boggaaga WordPress iyo sidoo kale kuwa macaamiishaada ah waxay aad ugu tiirsan yihiin sida feejignaanta aad ku jirtoilaalinta khayaanadaas.
Artem Abgarian, oo ah Maamulaha Guusha Macaamiisha Sare Sare Adeegyada Digital, waxay soo bandhigaan qaar ka mid ah khiyaamooyinka aan caddaynta ee hack-ka, kuwaas oo ka dhigi kara boggaga internetka inaad ka hortagto khatarta:
1. Isticmaal bogag ammaan ah.
Bogga login WordPress badanaa maahan mid aad u adag. Wixii aKhawariiste qibrad leh, waxaa suurtogal ah in si daacad ah u sameyso habka aad u gali karto boggaga internetka ee bogga bogga ee gaarka ah. Markaad sameysidBogga WordPress, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo ku darida / wp-login..php ama / wp-admin / shabakada bogga aad ku sugantahay. Qiyaastani waxay noqon kartaaka hortagaan nooca noocaan ah iyo sidoo kale weerarro kale oo raqiis ah. Isticmaalka furaha nabdoonaanta ayaa sidoo kale ka caawin kara guddiga maamulka ee goobtaada inay sarreeyaanamniga. Sidaa darteed, ka fogow ereyada caadiga ah sida 12345 ama erayga sirta ah ee sahlan.
2. Ku dhaji xogta adiga oo isticmaalaya SSL.
Lakabka ammaanku wuxuu hubinayaa in is dhaafsigaXogta u dhexeeya browser iyo server waa mid amaan ah. Natiijadu, kambuutarku wuxuu yeelan karaa waqti adag in la qorto xogta ku jirta xogta.Halkii ay lahaan lahayd magacyo iyo lambaro, hackerku wuxuu kulmayaa koodh.
3. U oggolow 2 aqoonsi aqoonsi.
Mid ka mid ah siyaabaha loo hubiyo ammaankaagamacaamiishu waa ilaa 2fa. Qaar ka mid ah hackers-kii guuleysta ayaa soo afjaraya koodhka xisaabaadka badan. Si kastaba ha ahaatee, 2-qodob oo caddaynayaku dar lakabka amniga ee kale. Natiijo ahaan, erayga laftiisu maaha mid ku filan. Codes-ka la isticmaalo waa in la helaalaga bilaabo fariin telefoonka gacanta, kaas oo aan laga yaabaa in macluumaadka hacker leeyahay.
Hackers waxay aasaas u yihiin inta badan dambiyada internet-ka ee maanta la kulmay. Mid kastaHawlgallada internetka waxay ku xiran tahay habka hack ama wax-qabadka wax-qabadka. Waa lagamamaarmaan u yahay barnaamijka shabakada si uu u hubiyo hababkaIlaalinta kiisaska feejignaanta waa inay noqdaan feejignaan iyo sidoo kale inay hubiyaan in ay ka badbaado weerarradan. Ammaanka ganacsigaagaWebka ayaa ku jira gacmahaaga. Tilmaamahan wuxuu bixiyaa hababka caddaynta ah ee caddaynta, taas oo kor u qaadi karta amniga goobtaada. Xaaladaha qaarkood,ilaalinta boggaaga internetka ee ka hortagga faylasha waxay hubin kartaa in aad raadineyso gawaarida raadinta (SEO) dadaalka miraha sida Google ma calaamadeysogoobtaada sida badbaado la'aan.